सबैखाले प्रविधि साउथवेस्टर्न कलेजमा छ | Aaja ko Shiksha
साउथवेस्टर्न कलेज, बसुन्धरा, काठमाडौं
साउथवेस्टर्न कलेज कस्तो कलेज हो ?
यो आफैंमा पृथक कलेज हो । नेपालकै भूमिमा, नेपालीद्वारा नै सञ्चालित तर फरक ढंगले चलेको छ । शिक्षण सिकाइ प्रक्रिया, सिक्ने सिकाउने कुरा, सिकाइ व्यवहार, सम्झने र सम्झन सक्ने बनाउने विधि फरक छ । संसारमा सबैलाई दिनमा २४ घण्टा नै मिल्छ । सबैलाई बराबर समय भएपनि कोहीले चन्द्रमा चुमिरहेको छ, कोही सजिलोसँग बाच्न नै संघर्ष गरिरहनु परेको छ । यही भूमिमा हाम्रो कलेज छ, पढ्ने र पढाउने दुबै यही भूमिका हुन् । पाठ्यक्रम नेपाल सरकारकै हो । तर, हामी फरक ढंगले सञ्चालन गरेका छौं । हामीले नयाँ काम भन्दा पनि हरेक काम नयाँ ढंगले गर्दै आएका छौं । यही कारणले यहाँ विद्यार्थी र अभिभावकले उपलब्धि हासिल गर्नुभएको छ । विद्यार्थीहरुले हामी यस्तो वातावरण दिने प्रयास गरेका छौं । उनीहरु पछि संसारका जुनसुकै कलेजमा गएपनि नौलो अनुभुति महशूस गर्दैनन् । भौतिक पूर्वाधारमा, गुणस्तरमा, प्रतिभा प्रष्फुटनमा ।
अन्तर्राष्ट्रियस्तरको शिक्षण सिकाइका लागि कस्तो प्रयास गर्नुभयो ?
यो कुरा अन्यले बोलेर सुनाउँछन् । तर, हामीले गरेर देखाएका छौं । हामीले विद्यार्थी र अभिभावकहरुलाई आएर हाम्रो कलेजको भिजिट गर्न आग्रह गर्छौं । हाम्रो नतिजा हेर्नुहोस्, उत्तीर्ण प्रतिशत हेर्नुहोस्, हाम्रो अनुसन्धान र विकासको समूहको टिम हेर्नुहोस्, यहाँका शिक्षक समूह हेर्नुहोस् हामीले गरेका कुराहरु लेखाइमा भन्दापनि भिडियोमा पनि हेर्नुहोस् । मलाई गाउँ, शहर, विदेश र विश्वकै अनुभव छ । विश्वका झण्डै ३७ बढी देशका २०० विश्वविद्यालय घुमेको छु र अमेरिका बसेर पढेको छु । यी अनुुभवका आधारमा हामीले कलेजको विकास गरेका छौं । एकातिर हाम्रा युवाहरु जागिर नपाएर विदेशिन बाध्य छन् भने अर्कोतर्फ हामी जस्ता संघ–संस्थाहरुलाई दक्ष जनशक्ति पाउनै मुस्किल छ । हाम्रो स्कूल र कलेजको उत्पादन श्रम बजारमा बिक्नेखालको भएनन् । सर्टिफिकेट गोल्डमेडलिष्ट र डिष्टिङ्कसन हुनेले पनि जागिर पाउन सकेनन् सीप नहुनाले । त्यसैले, हामीले सीप र शिक्षालाई सँगसँगै लगेका छौं । हामीले काम पाउने मात्रै होइन, रोजगारी सिर्जना गर्नसक्ने बनाएका छौं । हाम्रो कलेज आइएसओको गुणस्तर प्रामाणित कलेज हो । हामी अन्य कलेजसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैनौं । हामी असल काम र फरक काम गर्दै अघि बढ्छौं ।
राम्रो कलेज कसरी छनोट गर्नुपर्ला ?
अहिले जुन प्रक्रिया देखिएको छ । त्यसलाई त म विकृति भन्छु । एकातिर विद्यार्थीहरु दिनमै १०/२० वटा कलेज भिजिट गरिरहेका छन् । अर्कोतिर कलेज सञ्चालकहरु लोभ्याउनतिर गइरहेका छन् । अनेक थरीका विज्ञापन गरेर । ११ महिना चूप लागेर बस्ने १२ औं महिनाको १ महिनामा चाहिँ व्यवसायिक विज्ञापन गर्ने र फेरि सकियो । १६/१७ वर्षको प्रमुख उमेर को २ वर्ष बिताउन एउटा कलेज छनोट गर्ने हो । सस्तो कलेज मात्रै छान्दा पछि समस्या आउन सक्छ । त्यसैले कलेज छान्दा पहिले त्यो कलेज भौतिक पूर्वाधारको अवस्था कस्तो छ हेर्नु पर्छ, सुरक्षित र बलियो हुनु पर्छ । वातावरण राम्रो हुनु पर्छ । वातावरण सिकाइका लागि महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यस्तै, फ्याकल्टिजहरु र विगतको नतिजा कस्तो छ हेर्नु पर्छ । विगतका कलेजका उत्पादन हाल के गरिराखेका छन् ? कहाँ–कहाँ पुगेका छन् ? हेर्नु पर्छ । कलेजको लोकेसन पनि विचार गर्नु पर्छ । धेरै डिस्टर्ब हुने ठाउँमा छ कि छैन, विचार गर्नु पर्छ । कलेजको समुदायमा कस्तो छाप छ ? कत्तिको नाम कमाएको छ ? यी सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर राम्रो कलेज छनोट गर्नु पर्छ ।
अभिभावक वा विद्यार्थी यसै कलेजमा किन आउनुपर्ला ?
आउनैपर्छ, भर्ना भएर पढ्नै पर्छ भन्ने छैन । तर, एकपल्ट कलेजको भिजिट गरेपछि त्यत्तिकै फर्कन मन मान्ने छैन । कलेजको वातावरण हेर्नुहोस् । नतिजा, अतिरिक्त क्रियाकलाप हेर्नुहोस् । हामीले भनेको कुरा नसुन्नुस्, गरेको कुरा हेर्नुहोस् । हाम्रो शुल्कको अवस्था अन्यभन्दा थोरै महङ्गो छ । तर, तिरेको भन्दा धेरै गुणा विद्यार्थीले फिर्ता पाउँछन् । हामीले लिएको उनीहरुको दुई वर्ष समयलाई स्वर्णिम बनाइदिनेछौं । यहाँ भर्ना भएपनि थप ट्युसन पढ्नै पर्दैन । हाम्रोमा भर्ना गरिदिएपछि अभिभावकले विद्यार्थीको गुणस्तरीय शिक्षा, सुरक्षा र भविष्यको बारेमा सोच्नै पर्दैन । हाम्रो कलेजमा बजारका उत्कृष्ट शिक्षकहरुको समूह छ । जसलाई हामीले विभिन्न शिक्षण तालिम दिएका छौं । कजेल पूर्णरुपमा डिजिटल छ । पेपरलेस छ । सबै काम प्रविधिमा आधारित छ । गृहकार्य विद्यार्थीको प्रोफाइमा पुग्छ । संसारमा शिक्षण सिकाइमा प्रयोग हुने सबैखाले प्रविधि हामीसँग छ ।